मन्त्री नहुँदा कर्मचारीलाई सास्ती | Nagarik News - Nepal Republic Media
देउवाले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन्। परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी भने बुधबारदेखि नारायण खड्काले लिएका छन्।
देउवाले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न अलमल गरेझैं सचिवालय विस्तार गर्न पनि अलमल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म घोषित रूपमा भानु देउवामात्र प्रमुख स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरिएका छन्। भानुबाहेक अन्य व्यक्ति घोषित रूपमा देउवाको सचिवालयमा नियुक्त गरिएका छैनन्। उनको निजी सचिवालय कर्मचारी पनि थोरै छन्।
‘केपी ओलीले ध्वस्तै बनाए’
प्रधानमन्त्रीहरूले सिंहदरबार नगई बालुवाटारबाटै काम चलाउने गर्छन्। के सिंहदरबार नगए पनि हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री सिंहदरबार जानै पर्छ। नगएर हुँदैन। सिंहदरबारबाटै मूल काम गर्नुपर्छ। सिंहदरबार नगई बालुवाटारबाट काम गर्ने परम्परा केपी ओलीले बसाले। उनले थिति ध्वस्तै बनाए। ओलीले बिगारेको थिति सच्याउनु राम्रो हो।
सिंहदरबार नगई बालुवाटारबाट काम गर्दा के असर पर्छ ?
धेरै असर पर्छ। प्रधानमन्त्री दैनिक जसो सिंहदरबार जाँदा कर्मचारीमा अनुशासन बढ्छ। यसको मनौवैज्ञानिक प्रभाव कर्मचारीमा पर्छ।
तर केपी ओलीभन्दा अघि पनि प्रधानमन्त्रीहरू बालुवाटारबाटै काम गर्थे, होइन र ?
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि त्यस्तै गरे। बालुवाटारबाटै काम गरे। तर केपी ओलीले त थिति धेरै बिगारे। अब सच्याउनुपर्छ।
तर प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट पनि बालुवाटारमै गर्ने गरेका छन् नि ?
विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट तथा अन्य बैठकहरू सिंहदरबारमै हुनुपर्छ, बालुवाटारमा होइन। यस्तो थितिलाई सच्याउनुपर्छ।
पार्टीका बैठकहरू बालुबटारमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
पार्टीका बैठकहरू बालुवाटारमा होइन। पार्टी कार्यालयमा गर्नुपर्छ। तर पार्टीका बैठक, मन्त्रिपरिषद्को बैठक, महत्वपूर्ण भेटघाटसमेत बालुवाटारमा हुने गरेका छन्। यसलाई सच्याउनु राम्रो हो।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७८ ०६:२२ शनिबार